जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओ खुला, कति र कसरी भर्ने ? – News Book Online
जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओ खुला, कति र कसरी भर्ने ?
असार ११, २०७८ १७:४४ प्रकाशित
सो अवधिसम्म माग अनुसारको आवेदन नपरेमा यही असार २५ गतेसम्म शेयर बिक्री खुला गरिने संस्थाले जानकारी गराएको छ । १९ करोड ७७ लाख ३० हजार बराबरको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सञ्जयकुमार मण्डलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रतिकित्ता एक सय अङ्कित दरका १९ लाख ७७ हजार ३ सय कित्ता साधारण शेयर बिक्री खुला गरिएको छ । त्यसमध्ये जारी पूँजीको पाँच प्रतिशत अर्थात् ३० हजार ४२० कित्ता शेयर कर्मचारीका लागि र कूल निष्कासनको पाँच प्रतिशत अर्थात् ९८ हजार ८६५ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ ।